🥇 ukubalwa kwezimali ngokungabikho emsebenzini
Isilinganiso: 4.9. Inani lezinhlangano: 175
Ividiyo yokubalwa kwemali ngokungabikho emsebenzini
Oda ukubalwa kwezimali ngokungabikho emsebenzini
Ukubalwa kwezimali okungalungile ngokungabikho kwanoma iziphi izenzo emsebenzini nokungafiki esikhathini, indlela akuyona eyokuchuma, kepha ukwehla kwesimo nokusebenza kahle kwebhizinisi. Ukugcina amarekhodi ngokufanele, lapho amaphutha engekho kanye nemiphumela ephansi, kudingeka indlela yomuntu ngamunye nohlelo olukhethekile olungaxazulula izingqinamba futhi lwenze amahora wokusebenza asebenze ngaphandle kwamaphutha nobunzima. Kunokukhethwa okuningi kwezicelo ezahlukahlukene emakethe, kepha uhlelo lwe-USU Software lungumsizi obaluleke kakhulu ngentengo engabizi nemali yokubhalisela yamahhala, ngokuhlukaniswa kwamalungelo abasebenzisi ahlukile kwabanye ekusebenzeni nasendaweni ebanjiwe. Amamojula nezilimi kukhethwa ngakunye kunhlangano ngayinye, ngokucela nangokusebenziseka kwawo wonke umuntu. Abasebenzi bakhetha ngokuzimela amathuluzi, becabangela umsebenzi webhizinisi. Kumodi yokuphathwa kweziteshi eziningi, abasebenzi bayakwazi ukufinyelela kuhlelo lokusebenza ngokungena ngemvume ku-akhawunti ngaphansi kokungena ngemvume komuntu siqu, ukufaka idatha ezingxenyeni zokubalwa kwemali kanye nemisebenzi yomsebenzi womsebenzi ngamunye, ukuqopha ukufundwa kokungena nokuphuma, ukungabikho, kanye amakhefu emini. Zonke izenzo ziyaboniswa kuhlelo lokusebenza, zithwebula zonke izenzo zomsebenzisi, zinikeze ukuholwa ngemininingwane enembile. Kumodi yabasebenzisi abaningi, ochwepheshe bangashintshanisa idatha, bahlanganyele omunye nomunye, badlulise idatha nemilayezo, kunethiwekhi yendawo nakwi-Intanethi. Abaphathi bangahlaziya futhi bagcine amarekhodi abo bonke abangaphansi kwabo, babone idatha ngesikhathi sangempela kusuka kudivayisi yabo, ekhombisa ukwenziwa ngabasebenzi, ngomsebenzi nokungabikho kwabo, bakha amatafula nezingodo ngokufundwa okunembile. Lapho kungekho imininingwane yokusebenza okwenziwe isikhathi eside, uhlelo lokubalwa kwemali luzenzela ngokuzenzakalela umbiko, lwazise umuntu ophethe ukuxazulula le nkinga, kucatshangelwa izenzo zakamuva nenani lomsebenzi owenziwayo, ngaphandle kwamaphutha nokwephulwa komthetho.
Abasebenzi bangenza ngasikhathi sinye imisebenzi yabo, kucatshangelwa ubukhona berekhodi ngalinye, lapho uhlelo lufunda khona ulwazi futhi lubala isikhathi esisetshenzisiwe ngempela, kucatshangelwa amashejuli womsebenzi, ukubala umholo wanyanga zonke. Kungenzeka ukubona konke ukusebenza kwesisebenzi ngasinye kwimodi ekude, ukuba nekhompyutha enkulu lapho lonke ulwazi lukhonjiswa ngendlela yamawindi ahlukile, amakwe ngemibala ehlukene nedatha ethunyelwe ngokuya ngomsebenzi womsebenzi. Uma kungekho datha kubasebenzi, uhlelo lukhipha imininingwane, lunikeze imininingwane eningiliziwe futhi esesikhathini, evumela nokufaka iwindi elihlukile lesisebenzi esikhethiwe, ukubona lonke ulwazi ngemisebenzi, ngesikhathi semisebenzi, umsebenzi, ukungabikho, njll.
Hlaziya ukusebenza kwesoftware bese uhlola wonke amathuba, atholakala ngenguqulo yedemo, etholakala mahhala. Ungaxhumana nazo zonke izingqinamba nochwepheshe bethu, abakujabulelayo ukweluleka ngezinombolo ezibonisiwe.
Ukubalwa kwemali ngokungabikho komsebenzi nokulawulwa kwemisebenzi yomsebenzi nesikhathi kwenziwa ngokuzenzakalela, kusiza ekufezeni imisebenzi ebekiwe, kuzenzakalela zonke izinqubo, ukubhekela umsebenzi ngamunye, ukunciphisa umsebenzi nemizamo yochwepheshe.
Ukudluliswa kwedatha kwenziwa ngaphandle kokungabikho kwezinhlelo zokusebenza ezingeziwe noma amadivayisi akhelwe ngaphakathi ngekhompyutha eyinhloko, ekhombisa izinto ezinembile zokuhlaziya ukusebenza komsebenzi owenziwe, ngokungabikho kwezinhlobo ezahlukahlukene zamaphutha nokuvakashelwa kumasayithi ahlukahlukene nezinkundla zokudlala .
Ukuzenzakalela kwemisebenzi yokukhiqiza kuzoncishiswa ngokusebenza kwabasebenzi nangezinsizakusebenza zebhizinisi.
Imenenja, ngokungafani nabaphathi bayo, inamathuba angenamkhawulo, ahlukaniswe ngamunye ngokwezinga le-accounting esemthethweni, enikeza ukuvikeleka okuphezulu kokufundwa kolwazi. Ukubalwa kwemali kude kwesistimu yolwazi oluhlanganisiwe ngokungabi bikho komsebenzi owengeziwe kunikezela ngemibhalo nemininingwane edingekayo egcinwe kunguqulo ye-elekthronikhi kuseva ekude. Uma ingekho injini yokusesha yokuqukethwe, umsizi ongenakuguqulwa, ulungiselela isikhathi sokusebenza sochwepheshe. Idatha ingafakwa ngesandla noma ngokuzenzakalela ngokungenisa izinto ezivela emithonjeni ehlukahlukene. Lapho kubalwa isikhathi sokusebenza, imininingwane eningiliziwe ngomsebenzi, ngesimo nokungabikho kwabasebenzisi ezindaweni zokusebenza, iyarekhodwa, kuqhathaniswa futhi kubalwe inani elilodwa lamahora asetshenziselwe umholo olandelayo.
Kwimodi ekude, idatha idluliswa ngenethiwekhi, ivumelanisa amadivayisi asebenzayo womsebenzisi kuhlelo lokusebenza, lapho kungekho zinkinga nge-Intanethi, ekhombisa esikrinini esikhulu somfundi wonke amawindi avela kumapaneli omsebenzi wabasebenzi.
Ukwahlukaniswa kwazo zonke izinto kusigaba esisodwa noma kwesinye kuvumela ukugcinwa kwamarekhodi wedatha ngempumelelo nangempumelelo, ngaphandle komkhawulo ezinkomba zokwakheka namafomethi, amatafula, kanye nemibhalo.
Imininingwane nemiyalezo ithunyelwa ngesikhathi sangempela ngaphezulu kwendawo noma nge-Intanethi, ngaphandle kwezinkinga. Iziteshi zokubalwa kwezimali zabasebenzisi abaningi nezokuphatha zinikeza bonke abasebenzi ukufinyelela okukodwa ohlelweni lokubalwa kwemali ngaphansi kwamalungelo namakhono, ikhodi yokufinyelela. Isisebenzi sikwazi ukwenza imisebenzi eyabelwe yona, efakwa ngombono ofanayo kusihleli sezinhloso nemisebenzi. Uma kwenzeka ukungabikho isikhathi eside nokungabonakali kwezenzo nemisebenzi, uhlelo oluzenzakalelayo lusebenza ngokubika ngemilayezo ye-pop-up, luguqula imibala yenkomba. Ngokugcina ithrekhi yomsebenzi wakamuva, kungenzeka ukuhlaziya ukusebenza namandla esisebenzi ngasinye.
I-interface yohlelo lokusebenza lwe-accounting yenziwe ngezifiso ngumsebenzisi ngamunye ngokuzimela, ikhetha amamojula adingekayo, isikrini se-splash, nesampula lokukhiqiza imibhalo. Amamojuli akhethwa ngawodwana enhlanganweni ngayinye, lapho kungenzeka khona ukuba nelogo ngayinye. Ukubalwa kwemali nokuqapha ukungabikho komsebenzi lapho usebenzisa usizo lwethu kusiza ukuthuthukisa ikhwalithi nokusebenza. Ikhophi yokulondoloza yonke imininingwane igcinwa nge-othomathikhi kuseva, iqinisekisa ukugcinwa kwesikhathi eside kungashintshiwe. Ukwakhiwa kwemibhalo nemibiko kwenziwa ngendlela ezenzakalelayo, ngaphandle kwemingcele. Umsebenzi wenziwa cishe wonke amafomethi e-Microsoft Office.
Ukuntuleka kokuxhunywa kwamadivayisi ahlukahlukene anobuchwepheshe akunamphumela omuhle ekukhuleni kwebhizinisi, yingakho uhlelo lwethu lunikeza ukuvumelanisa kanye nokubalwa kwamadivayisi nezinhlelo zokusebenza.